Jaamacadda Kismaayo - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Jaamacada Kismaayo)
"Hiigsanaya mustaqbal cad"
si gaar ah loo leeyahay
Dr. Maxamed Cabdi Aden
Kismaayo, Jubbada Hoose, Soomaaliya
Jamaacada Kismaayo (Af-Ingiriis: Kismayo University) waa jaamacad si gaar ah loo leeyahay, taasi oo ku taala magaalada Kismaayo, wadanka Soomaaliya. Jaamadaca Kismaayo waa mida sadexaad ee ugu wayn Jaamacadaha Soomaaliya.
Xafladani oo ahayd mid si heersara ah loo soo agaasimey iskalmarkaana shahaadooyin lagu gudoosinayey ardaydii ugu horaysey oo ka qalinjibiyey jaamacada magalaada Kismaayo ayaa waxay maanta ka dhacdey xarunta wayn ee jaamacada magaalada kismaayo. Jaamacadan kismaanyo waxa la aas aasay Aug 31, 2005. Munaasabadaasi shahaadooyinka lagu gudoonsiinayey ardayda ka qalinjibisey jamaacada kismayo ayaa waxaa kasoo qayb galey dad aad u fara badan kuwaasoo kala ah, mas’uulyiinta Jaamacada,Macalimiinta,Waalidiinta, Ardayda iyo dadweyne aad u fara badan, xaflada ayaa ahayd mid jawi nabdoon ku bilaabatey kuna dhamaatay.
Ardayda ka qalinjabisay Jaamacada ayaa waxa ay dhanyihiin 32 arday,kuwaasoo ka qalin jabiyay kulyadaha kala ah, Maamulka iyo Dhaqaalaha,iyo kulyadah shaareecada ama shareeca walqeynuun .
Inkastoo ay tahay marki ugu horaysey ee ay arday ka qalin jabiyaan jaamacad Kismaayo ay leedahay,ayaa hadana waxaa xusid mudan in ardayda manta qalin jabisay ay ku jiraan labo gabdhood,waana gabdhihii ugu horeeyay ee abid ka baxa jaamacada ku taalo gobbalada jubbooyinka .
Cusmaan Maxamed Ismaaciil oo ah madaxa wax barashada jaamacada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in ardaydani ay yihiin kuwii ugu horeeyay ee abid ka qalin jabiyo jaamacada ksimaayo,oo uu sheegay in dhidhibada lo taagay taariikhdu markay ahayd 1 sep 2005,waxa uu intaasi uu ku dary in kulyadaha ay jaamacadu dadka barto ay yihiin ilaa sadex kulyadood oo kala ah kulyada Maamulka iyo Dhaqaalaha iyo kulyada Shareecada walqeynuun.
Mr Ismaaciil ayaa waxa uu inaasi ku daray inay jamacada dhawaan ay ku soo kordhin doonan kulyadaha kala ah Caafimaadka iyo kulyada Beeraha.
Gudoomiyaha dalada waxbarashad Axmed Faarax AWeys Jen aya kamid ahaa dadkii goobta ka hadlay,waxana uu ardaydii qalin jabinaysay uu ku booriyay inay sii wadaan raadinta aqoonta isagoona sheegay iany hada heleen furihii aqoonta,Mr Awws ayaa waxa uu ardayda u sii raaciyay in aqoonta ay barteen ay wax ugu qabtaan dalkooda,dadkooda iyo diintooda.
Maamulaha guud ee jaamacada Kismaayo,Mr Suldaan, oo khudbadii u ka jeediyay xafladii qalin jabintana waxa uu shirkadaha ganacsiga ee Kismaayo uu ugu baaqay inay ahmiyada koobaad ay siiyaan ardayda Jaamacada ka qalin jabisay,taasoo micnaheeda yahay inay shaqaalaysiiyaa.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaamacadda_Kismaayo&oldid=162156"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 10:30, 6 Oktoobar 2016.